Halkan Kaga Boggo Hadaladii Ay Dareenkooda Ku Cabireen Xiddigihii Xalay Loo Han-Weynaa Ee Neymar Iyo Mbappe Kaddib Guuldarradii Champions League - Gool24.Net
Halkan Kaga Boggo Hadaladii Ay Dareenkooda Ku Cabireen Xiddigihii Xalay Loo Han-Weynaa Ee Neymar Iyo Mbappe Kaddib Guuldarradii Champions League
August 24, 2020 Apdihakem Omer Adam
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa xalay la kulantay qalbi jab kaddib markii ay dhigooda Bayern Munich u waayeen koobka ugu xiisaha badan heer kooxeed ee Champions League oo ay markoodii ugu horreysay abid Final soo gaadheen.
Labada xiddig ee sida gaarka ah xaaladooda isha loogu hayay ayaa ahaa Neymar Junior iyo Kylian Mbappe oo hormood u ah weerarka Paris, xiddigahaas oo daqiiqad kasta halis abuuri karayay ayay ku adkaatay inay kala duwanaansho u sameeyaan kooxdooda.
Neymar JR oo ahaa xiddig lagu maadsaday maadaama oo uu sameecad uu ku xafladaysto garoonka la yimid ciyaarta kahor ayay kaamerooyinku qabteen isaga oo ilintu ka da’yaso kaddib ciyaarta.
Sidoo kale Mbappe oo fursado dilaa ah khasaariyay ayaa qalbi jab kaga baxay garoonka xilli uu doonayay inuu Champions League ku daro liiska koobabka waaweyn ee uu 21 sano jir ku haysto.
Haddaba, Neymar iyo Mbappe ayaa dareenkooda cabirray kaddib guuldarradii xalay iyagoo adeegsanaya baraha bulshada gaar ahaan barta Twitter-ka.
Aan ku bilawnee Neymar ayaa sheegay inay guuldarradu qayb ka tahay ciyaarta isaga oo u mahad celiyay taageerayaasha kooxdiisa isla markaana u hambalyeeyay kooxda koobka qaaday ee Bayern.
“Guuldarradu waa qayb kamida ciyaaraha, waxaanu isku dayi doonaa waxkasta, waxaanu dagaalami doonaa ilaa dhammaadka, waad ku mahadsan tihiin taageerada iyo jacaylka qofkasta ka yimid, hambalyo Bayern” ayuu Twtter-ka ku yidhi 28 sano jirka ree Brazil.
Dhinaca kale Mbappe ayaa sheegay inuu ka niyad jabsan yahay inuu sanadkan koobabkiisa ku dari kari waayay CL balse xusay in noloshu ay sidaas tahay.
“Waan ka niyad jabsanahay in aanan sanadkan ku dhammaysan abaalmarinaha ugu wanaagsan, laakiin nolosha ayaa sidaas loo sameeyay, waxaanu ku dagaalanay dhammaan awoodayada, hambalyo Bayern, aad ayaanad ugu mahadsan tihiin taageeradiina”
Rashiid bade says: